FEC450 पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक लिफ्ट क्रेन, काउन्टर सन्तुलित लिफ्ट क्रेन - I- लिफ्ट उपकरण
FEC450 एक भारी शुल्क काउन्टरबलेन्स्ड पावर्ड ड्राइव वर्कशप क्रेन (बिल्ट-इन बलस्ट वेट) हो, २0० डिग्री पाभोटि arm हातको साथ, सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको साथ 5050० केजी भार माथि उठाउनको लागि उपयुक्त।यसलाई लिफ्टिंग र कम गर्न इलेक्ट्रिक विन्चसहित सुसज्जित छ। यो इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग, इलेक्ट्रिक हिड्ने र क्यान्टिलिभर इलेक्ट्रिक द्वारा विस्तार संग पूर्ण इलेक्ट्रिक छ। यदि एक नाजुक भार वा अप्ठ्यारो प्लेसमेन्टमा, घुमाउने गति एक घुंडी मार्फत कम गर्न सकिन्छ।
लिफ्टि system प्रणालीलाई सुरक्षा भल्भा लगाइएको छ जसले ओभरलोडि prevenलाई रोक्छ र यसको २0० डिग्री रोटेशनको प्रत्येक स्थितिमा मेसिन पल्टिने जोखिमलाई हटाउँछ।
जिब लिफ्टिंग, जिब लोअरि,, जिब एक्स्टेन्सन र जिब रट्र्यासनका लागि function फंक्शन हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटरबाट सुसज्जित।
ठूला क्षमता र उच्च रेटिंगहरूले पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग क्रेनलाई अधिकांश काम साइटहरूको लागि एक आदर्श समाधान बनाउँदछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् लामो र छोटो पहुँचमा, साथ साथै हाइड्रोलिक र म्यानुअल समायोजन क्षमताहरू। यस्तो उच्च प्रदर्शन को समाधान को एक विस्तृत श्रृंखला को साथ, I- लिफ्ट संग आफ्नो कार्यहरू समर्थन गर्न सही क्रेन छ।
तपाईंको वर्तमान र सम्भावित भविष्यको आवश्यकताहरूबारे जान्नको लागि कुन क्रेन तपाईंको लागि सही छ भनेर निर्धारण गर्न सफलतापूर्वक मद्दत गर्दछ। तपाईंको लागि सही क्रेन निर्दिष्ट गर्दै, यो डीसी संचालित वा हाइड्रोलिक हो, लामो समयसम्म चल्ने उत्पादकता सुनिश्चित गर्नेछ र क्रेन विफलता रोक्नेछ।
इलेक्ट्रिक क्रेन एकाईहरूलाई पम्प, हाइड्रोलिक जलाशय वा PTO आवश्यक पर्दैन, जसले तपाईंको लागत घटाउँछ। थप रूपमा, तिनीहरू ईन्जिन बिना नै सञ्चालन गर्दछन्, तिनीहरूलाई अवस्थाको लागि उपयुक्तको बनाउँदछ जब तपाईंको ट्रक चलिरहनु उपयुक्त हुँदैन।
हातमा काम गर्न ट्रकको स्थिति निर्धारण गर्दा यो सीमितता विचार गर्नुपर्नेछ। हाम्रो क्रेनको सामान्यतया असीमित घुमाव हुन्छ। या त विद्युतीय वा इलेक्ट्रिक / हाइड्रोलिक स्विभल छ जुन यो महत्त्वपूर्ण सुविधालाई अनुमति दिन्छ। नतिजाको रूपमा क्रेनको रोटेसनमा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल स्टपको कुनै सीमा छैन।
१. बूम बिजुलीका हिसाबले विस्तार गर्न सकिन्छ र छोटो पार्न सकिन्छ, समायोजन दायरा -17००-१-1730० मिमी हो
२. क्रेन २ 27० डिग्री इलेक्ट्रिकली घुमाउन सकिन्छ विभिन्न दिशामा अपरेशन आवश्यकताहरू पूरा गर्न
B. सन्तुलन तौल, कुनै आउट्रिगरहरू, अपरेटि area क्षेत्र नजिकको सबैभन्दा ठूलो सीमामा हुन सक्दछ
Space. ठाँउ बचाउनका लागि तहमा फोल्ड गर्न सकिन्छ
Er. एर्गोनोमिक ह्यान्डल, सहज र अपरेट गर्न सजिलो।